ညတုန်းကကြည့်တဲ့မှန် | ဥက္ကာကိုကို
အတက်အဆင်း…. အတက်… အဆင်း
ခဏခဏ ရထားပေါ်က ကန်ချခံရ
ဝေဒနာတို့ရဲ့ အလိုတော်အရ ငါဟာ
ညီမလေး ချစ်သူမ, ဖတ်ဖို့ရေးတဲ့ ကဗျာတချို့ရယ်
ကိုယ် လူရာဝင်ဖို့အတွက် သီးသန့်။
လူတိုင်းက တုံးအတယ်လို့ ပြောရလောက်အောင် ထုံထိုင်းပေမယ့်
ခေတ်ကရှေ့ကသွားပြီး လူက အမြဲနောက်မှာ ကျန်နေခဲ့ပေမယ့်
ဟူး…. လောကကြီးက ဖွယ်တယ်တယ်ပါတကား´´
သံဝေဂ စကားတွေပြော ပြော ပြီး
မကောင်းတာမှန်သမျှ စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ စမ်းစမ်းကြည့်တတ်ပြီး
ဘယ်လိုချွတ်ချွတ် မကျွတ်တဲ့ မိစ္ဆာပဲ ဆိုချင်ဆိုပါတော့။
ဟောဒီကဗျာ ဟောဒီမှာ ဆုံးသွားပါပြီ
ဆက်မဖတ်ရုံအပြင် ဒီ့ထက်မရှိ။ ။
21, Nov , 2006.
တို့သူငယ်ချင်းများ စစ်ထဲဝင်ရင်လေ…. →
One comment on “ညတုန်းကကြည့်တဲ့မှန်”
မဗေဒါ on December 27, 2010 at 1:49 pm said:
ဟိုင်း ………. ဒီးယား ….ခေတ်ပေါ် ကဗျာ ဆရာဂျီး … မောင်ကိုကို
ဆက်မဖတ်ရုံ လို့ ပြောလို့မရအောင်…အောက်က မဖတ်ရသေးတာတွေ အကုန်ဖတ်နေပါသည်…။ ကဗျာဟောင်းလေးတွေကိုလည်း ခံစားပေးသွားပါသည်… နားမလည်တာကိုလည်း (သိပ်အဆင့်မြင့်တဲ့ ပန်းချီများလို )နားမလည်လည်အောင် အတင်းအဓမ္မ ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့် ကြံဖန် ထိမိအောင် ခံစားသွား ပါသည်…။
ချက်ချင်း မရောက်တာကိုလည်း အပစ်တော်မယူစေချင်ပါပဲ… ယဉ်ကျေးစွာ ချိတ်ဆိုးပါနဲ့ဟု မောင်ကိုကို သံတွဲအား မကြီးပန်းဗေဒါမှ တောင်းပန်ပါသည်ရှင်… ။
အစ္စလာမ် အယူအဆများကိုလည်း နဲနဲပဲ မြည်းစမ်းရပါသေးတယ်.. ။ သေချာ ပြန်ဖတ်မှရမယ်..။ စိတ်ဝင်စားစရာ မတူတဲ့ အယူဝါဒတွေ တွေ့ရမယ်လို့ ယုံမှတ်ပါတယ်..။
ဓူဝံကြယ်လေးနှင့်လည်း ဗိုလ်နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွင်ကြပါစေလို့
တော်သေးပြီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး… ဝန်ရိုးစွန်းမှ အမကြီးဗေဒါ ..